भिडियो Archives - Page 19 of 22 - Purbeli News
अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा रोमान्स गर्दै साम्राज्ञि र आकाश (भिडियो सहित)
इटहरी/ प्रतिक्षित फिल्म ‘तिमी संग’ को सिर्ष गीतको भिडियो सार्बजनिक भएको छ । आज काठमाडौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त भिडियो सार्बजनिक गरिएको हो । अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पहिलो पटक यो फिल्मका दृश्यहरु कैद गरिएको छ । यो भिडियो पनि त्यही छायांकन गरिएको हो । सार्बजनिक भिडियोको गीतमा मधुरा भट्टचार्य र राहुल मुखर्जीको स्वर रहेको छ । त्यस्तै लेखु सह...
यसरी फुट्यो नेपाल आइडलको टीम ? अब आउनेछ अर्को विश्वप्रख्यात शो
‘अमेरिका बोइज’को टिजर सार्बजनिक (भिडियाे सहित)
काठमाडौ/ चलचित्र अमेरिका बोइज को टिजर सार्वजनिक भएको छ । सीबर्ड्स पिक्चर्स र बडी इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा प्रकाश भुजेल र इन्द्र प्रशाद खरेलले निर्माण गरेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता समिर खरेल हुन् भने सह निर्माताका रुपमा अनुप थापा यमुना खरेल र राज के.सी रहेका छन् । अर्पन थापा सुनिल थापा सन्दिप छेत्री हरिहर शर्मा, कामेश्वोर चौरासिया, अभय बर...
बुद्ध लामाको पहिलो गीतमा यसरी पोखियो पल र आचलको प्रेम (भिडियो सहित)
इटहरी/ नेपालमा पहिलो पल्ट भित्रीएको अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाईज शो ‘नेपाल आईडल’ को हाल दोश्रो सिजनको अडिसन हुने तयारिमा छ । यसै सिलसिलामा नेपाल आईडल पहिलो सिजनका बिजेता बुद्ध लामाको पहिलो गीतको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । ‘तिमी साथ भएपछि’ बोलको गीतलाई भर्खरै युट्युब मार्फत सार्बजनिक गरिएको हो । गीतको भिडियोमा अहिलेका हटकेक जोडि ‘पल शाह र आच...
विक्रमले ल्याए मादलु (भिडियाे )
काठमाडाैं । पूर्वेली गायक विक्रम धमलाले नयाँ सांगितिक काेशेली ‘मादलु’ ल्याएका छन् । लाेक पप प्याट्रनमा अाएकाे ‘मादलुकाे घिनघिन तालैमा’ बाेलकाे गीतमा शब्द अस्मिता नाछिरिङ रार्इकाे रहेछ । गीतमा शंकर थापाले संगीत भरेका छन् । भने, एरेन्ज साहस साक्यले गरेका छन् । म्युजिक भिडियाेमा सुमी माेक्तान र तुलसी थापा मगरलार्इ फिचरिङ गरिएकाे छ । भने, उनीहरूलार्...
काठमाडौं / यतिबेला नायिका निता ढुंगाना निकै चर्चा परिचर्चामा पनि छिन् । यतिबेला निता अभिनित चलचित्र ‘हुर्रे’ हलमा लागिरहेको छ भने अर्को प्रतिक्षित चलचित्र ‘पञ्चायत’ प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ । सँधै कुनै स्थानमा बसेर पत्रकारसँग कुरा गरेकी या मिडिया हाउससम्मै पुगेर अन्तरवार्ता दिएकी ढुंगाना आज आफ्नै बेडरुममा बसेर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गरिरहेकी छिन् । ...
दुर्गेशको मायाको बोके दाह्री, यिनलाई भारि कि फुलबारी ? भिडियोमा हेर्नुस्
काठमान्डौ/ नेपाली सागितिक क्षेत्रकी निकै प्रतिभावान गायिका अनुष्का घिमिरेको प्रस्तुतिमा गायिका अनुष्का घिमिरे र गायक नरेश विसीको सुमधुर आवाजमा लोक पप गित मायाको बोके दाह्री बजारमा आएको छ । मायामा परेका प्रेम जोडिको भावहरुलाई गितमा समेटिएको छ । बैसको आवेगमा परेमा परेका मायालु जोडिलाई गितमा मार्फत अनुष्काले समेटेकी छन । निकै रमाइलो गितलाई अनुष्का ...
ईटहरी/ भनिन्छ ‘हिड्ने मान्छे लड्छ’ । लडेपछी उठ्दाको सफलताले आनन्द प्राप्त हुन्छ । यस्तै भएको छ अहिले सन्तोष परियारलाई । सनै देखि गीत गायनमा निकै रुचि भएका सन्तोषले युट्युब च्यानल ‘वाउ नेपाल’मा मा सोनिका संग अन्तरबार्ता गरेपछि सफलताको स्वाद चाख्न थालिसकेका छन् । निकै नै मिठो स्वर भएका उनी अन्तरबार्तामा आफ्नो दुख र जिन्दगिका ठक्करहरु सम्झिदै सुनाउदै ...
सुरु भयो नेपाल आईडल-२ को अडिसन, कहाँ-कहाँ र कहिले हुदैछ ? बिस्तृतमा हेर्नुस् (भिडियो सहित)
ईटहरी/ अन्तरास्ट्रिय फ्रेन्चाईज टेलिभिजन रियालिटी शो 'नेपाल आईडल' पहिलो सिजनको सफलतापछि यसको दोश्रो सिजन पनि हुने भएको छ । केही समय अघि दोश्रो सिजन घोषणा गरेको एपिवान टेलिभिजनले भर्खरै अडिसन मिति र स्थान पनि सार्बजनिक गरेको छ । देशका कुना कन्दरामा बसेरा आफ्नो गायन कलालाई तिखार्दै बसेकाहरुको लागि यो निकै ठूलो अवसर र स्थान बनेर आएको छ । पहिलो सिजनमा ...